N'obi Glass - China Xinfuxing Glass
2.0mm-4.0mm Solar n'obi iko
Solar Arc n'obi Glass
2.0mm-2.5mm Solar Arc n'obi Glass N'ihi ugboro abụọ Glas ...
FOB Ahịa: USD20.88 -47,88
Min iji: 1000SQM
Tụkwasịnụ Ikike: 100000SQM
Ịkwụ Ụgwọ: T / TL / C
Product Name n'obi iko
Okwu nkọwa: * Toughened iko na mesoo okpomọkụ omume. Ọ e ji guzobe a mgbali nchegbu oyi akwa na elu nke iko. The n'ibu ume na ike nke okpomọkụ na-eguzogide mmetụta na-mma, na-enwe a pụrụ iche na steeti irighiri.
Product ọkpụrụkpụ 5mm ~ 60mm
Akporo nke ngwa: Door, window, ákwà mgbochi mgbidi, escalator, nsu, nkebi, ewu ọta, n'ime ime mma, ngwá ụlọ, ezinụlọ ngwa
Note 1.In usoro njikwa, anyị kwesịrị ịṅa ntị nchedo n'akuku nke n'obi iko, n'ihi na nchegbu nke n'obi iko bụ ihe kasị lekwasị, na ozugbo mmetụta emee, o nwere ike ịbụ kpamkpam gbajiri. Mmekọrịta dị n'etiti size nke n'obi iko na mgbochi ifufe mgbali ga-n'ụzọ zuru ezu na-ewere n'ime imewe.
2.Tempered iko ike-re-ịkpụ.
3.Tempered iko nwere "mgbawa" n'ihe ize ndụ. Ọ e mere site imewe, echichi, ebe, ya àgwà, ojiji, na n'ala larịị etc..Using homogeneous toughened iko ma ọ bụ àjà ihe ọṅụṅụ ọcha iko ga belata puru nke iko-agbawa agbawa
4.Please soro kwekọrọ ekwekọ oru nkọwa nke echichi, dị ka: JGJ 113- "technical nkọwapụta maka iwuli iko ngwa" (gụnyere ndokwa), JGJ102- "iko ákwà mgbochi mgbidi engineering technical nkọwapụta", JGJ255- "ọkụ elu ụlọ na metal n'elu ụlọ technical nkọwapụta ".
Previous: laminated iko
Osote: egbochi ihe iko
Brown ise n'elu Glass
Mee Summer-House n'obi Glass
Building Construction Glass ogwe
mgbo Gosiri Glass Price
Na Glass Construction Glass
Efere n'obi Glass
China ụba Wall Glass
Clear ise n'elu Glass
Construction Mee u Glass
Construction Glass N'ihi Building
Mgbochi Glass Wall
Mgbochi Wall Mirror Glass
Mgbochi Wall reflective Glass
Mgbochi Wall agụụ Glass
Curved n'obi Glass
Ugboro abụọ glazed n'obi Glass
E Mgbochi Wall Glass
Ewepụghị Mgbochi Wall Glass
Ewepụghị Glass Disc
Ewepụghị Glass Price
Ewepụghị Nzọụkwụ Glass
Ewepụghị n'obi Glass
ise n'elu Glass N'ihi Building
ise n'elu Glass Manufacturer
ise n'elu Glass Price
Ise n'elu Glasstempered Glass
Glass Mgbochi Wall
Glass Mgbochi Wall Construction
Glass N'ihi Building Mgbochi Wall
Glass N'ihi Mgbochi Wall
glazed Glass N'ihi Ụlọ
Green ise n'elu Glass
Hot Sale Clear Ewepụghị Glass
Hot Sale Ewepụghị Glass
Price ise n'elu Gla SS
Now Clear ise n'elu Glass
Silkscreen E Bipụtara n'obi Glass
Solor n'obi Glass
N'obi ntekwasa Glass
N'obi ise n'elu Glass
N'obi Glass Door
N'obi Glass N'ihi Building
N'obi Glass ngwá ụlọ
N'obi Glass Panel
N'obi Glass Screen
N'obi Glass Isiokwu Top
N'obi reflective Glass
N'obi udidi Glass
N'obi Window Glass
ụba Plain Glass
Ultra Clear ise n'elu Glass
Walls Mpụga Building Glass
egbochi ihe iko